राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसँग किसुनजीका ती भेट – Sulsule
चन्द्रमणि गौतम २०७७ कात्तिक २३ गते १८:०१ मा प्रकाशित
स्थान : नारायणहिटी राजदरबारको प्राङ्गण ।
मिति : २०४७ कात्तिक २३ गते शुक्रबार ।
२०४७ को संविधान जारी गर्न स्व. राजा वीरेन्द्रले आफ्नै खल्तीबाट एउटा पत्र निकालेर शाही घोषणा गरेपछि सकिएको छ । यो संविधानका पक्षमा तत्कालीन राजदरबारमा शक्ति खेलाएर र शान देखाएर बसेका कसैको रुचि थिएन । तै पनि सो दिन मुलुकको सत्तावृत्तका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूमा चियाको चुस्कीसहित नयाँ संविधानप्रतिको खुल्दुली, भेटघाट र चर्चा भइरहेको छ ।
फोटो शेसनका लागि रानी ऐश्वर्यलाई त्यही भीडमा खोज्न राजा वीरेन्द्र, ‘एकैछिन, म वाइफलाई बोलाएर ल्याउँछु’ भन्दै आफैं खोज्न गएको बेला राजाले ‘वाइफ’ भनेको सुन्नेहरू आश्चर्य मान्दैछन् । त्यसै समयमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) र तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको जम्काभेट हुन्छ ।
किसुनजी अधिराजकुमारलाई अदबका साथ अभिवादन गर्नुहुन्छ । भेटघाटमा भएको संवादमा ‘क’ ले किसुनजी, ‘ब’ ले वीरेन्द्र र ‘ज्ञ’ ले ज्ञानेन्द्र भन्ने बुझिन्छ ।
‘क’ : (अपर्झट भएको भेटमा के बोल्ने भन्ने आतुरताको मनोविज्ञान देखाउँदै, तर हँसिलो र ठट्यौलो मुद्रामा) सरकारको निवास त बडा सुन्दर छ भन्ने मलाई लाग्छ । म त्यो बाटोबाट हिँड्ने गर्दा मोटरको झ्यालबाट एकपटक सरकारको निवासलाई हेर्नेगर्छु, बडा सुन्दर लाग्छ । त्यस्तो ठाउँमा बस्दा मन काव्यात्मक भइदिन्छ । त्यसैले त सरकारबाट राम्राराम्रा गीत कविता रचिबक्सेको रहेछ ।
‘ज्ञ’ : होइन, मलाई त प्रधानमन्त्रीजी, प्रधानमन्त्री निवास पो राम्रो लाग्छ । साउण्ड पोल्युसन त्यता कम छ…….।
‘क’ : उसो भए साटौँ कि सरकार ! ? (दुबैमा उन्मुक्त हाँसो चल्छ) ।
‘ज्ञ’ : सरी पिएम्, मैले त बधाई दिनै भुलेछु । कङ्ग्य्राचुलेशन । हामीलाई खुशी लागेको छ । संविधान सकुशल बनाएर लागु गराउन सफल हुनुभएकोमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई इतिहासले पनि सँधै सम्मानका साथ सम्झिरहने छ ।
‘क’ : सरकारको बधाई तथा अनुग्रहपूर्ण शुभकामना पाउँदा म आभारी छु सरकार । यो संविधान एउटा सन्तुलनको बिन्दुमा अडिएको छ । यसलाई लागु गराउने र सफल बनाउनेमा सबैबाट सहयोग मिल्नुपर्छ । मलाई (सहयोग) मिल्नेछ भन्ने भरपूर आसा र भरोसा छ । यो संविधानको दुरूपयोग गरियो भने योभन्दा खराब संविधान अरू हुनै सक्दैन, रऽऽ अर्को संविधान पनि आउन सक्दैन, तर यो संविधानको सदुपयोग गर्यौँ भने दुनियामा योभन्दा बडिया संविधान पनि कुनै हुनेछैन ।
(यत्तिकैमा फोटो सेशनका लागि सरिक हुन दरबारका प्रमुख संवाद सचिवबाट अनुरोध आउँछ, दुबैजना फोटो सेशनका लागि दुबैले एक अर्कालाई अघि लाग्न हातले इसारा गर्छन, अन्तमा प्रधानमन्त्री अघिअघि अधिराजकुमार थोरै पछि भएझैँ प्रायः सँगसँगै जान्छन् । प्राङ्गणको समारोह सकिएपछि राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री भट्टराईवीच दरबारको कुनै बैठककक्षमा आधाघण्टा भेट र संवाद हुन्छ । राजा वीरेन्द्र आज निकै हँसिलो र फुर्तिलो देखिँदैछन् । यो संवादमा प्रयुक्त ‘क’ ले किसुनजी र ‘ब’ ले बीरेन्द्र भन्ने बुझिन्छ ।)
‘क’ : सरकार, सारा देश र दुनियाले आज हामीलाई हेरिराख्या छ । आज देशैभर उत्सब आएको छ । साँझमा सर्वत्र दीपावली हुँदैछ । सरकारको अनुग्रहपूर्ण योगदानले, भगवानको कृपाले र हाम्रा साथीहरूको, म वामपन्थी साथीहरूलाई त्यति नै भन्छु, तऽऽऽ सबैको कृपापूर्ण सहयोगले जनआन्दोलनलाई सेफ ल्याण्डिङ् दिन एउटा पक्ष पूरा गर्ने काम भा’छ । हाम्रा सर्वमान्य नेता गणेशमानजीको अर्को महत्वपूर्ण निर्देशन हामीलाई यो छ किऽऽ म अब कम्पलसरीली आम निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्छ ।
‘ब’ : प्रधानमन्त्री, हामीलाई पनि मुलुकमा मोर डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई गति दिने इच्छाले यो काम सफल भएकोमा खुशी लागिरहेको छ । मेरो इच्छा छ, मुलुकलाई यही संविधान मातहतबाट डेमोक्रेसी, स्ट्याबिलिटी र डेभलप्मेण्ट दिनुपरेको छ । डेभलप्मेण्ट बिनाको डेमोक्रेसी निरर्थक हुन्छ । यसबारेमा मेरो बीपी कोइरालासँग धेरै कुराकानी भएको थियो । यो दिन ता उहाँले पनि देख्न पाए यो मुलुकलाई कति राम्रो हुन्थ्यो ।…..यो कन्स्टिच्यूसनबारे हाम्रो अर्को पनि सन्तुष्टिको कारण छ, कुनै पनि कन्स्टिच्यूसनले आइदर इन लेटर अर् इन स्पीरिट त्यो देशको के भन्छ, जिओ–पोलिटिकल रियालिटीलाई समातेको हुनुपर्छ, त्यो यस (संविधान) मा छ ।
‘क’ : सरकार, म त एउटा पोलिटिकल एक्टिभिस्ट । जीवनभरि कन्स्टिच्युसनल मोनार्की र पार्लियामेण्टरी डेमोक्रेशीको स्थापनाका लागि हिँडेको मान्छे । बडा मेहनत र जेलनेल गर्नुपर्यो, लामो कष्टकर तपस्या नै भयो । तर हामीलाई यसबारे थोरबहुत ज्ञान भए पनि अनुभव नगण्य छ । संविधान बमोजिम काम गर्दैजाँदा विलफुल्ली नभए पनि भुलचुकवश गल्ती होला, त्यो बेला दरबारले ठानिदेला किऽऽऽ प्रधानमन्त्री वा सिंहदरबारमा बसेका मान्छेहरू अर्कै बाटो हिँड्न लागे कि ! म सरकारलाई एस्योर गर्न चाहन्छु, त्यसो हुनेछैन । यो संविधानले सिंहदरबारबाट संवैधानिक राजतन्त्रको ग्यारेण्टीको इच्छा गरेको छ र राजदरबारबाट पनि पार्लियामेण्टरी डेमोक्रेशीको ग्यारेण्टी खोजेको छ ।
एज अ प्राइमिनिस्टर एण्ड मिनिस्टर फर रोयल प्यालेस अफेयर्स् अफ न्युली इस्टाब्लिश्ड डेमोक्रेसी, म सचेत छु सरकार, किऽऽऽ श्री ५ लाई भेट्न जाँदा प्रधानमन्त्री जनताको प्रतिनिधि भएर राजदरबार जान्छ, राजदरबारमा श्री ५ लाई भेटेर फर्किँदा राजाको सन्देश वाहक भएर फर्किन्छ…..। सरकारलाई संस्कृतमा कत्तिको रूचि छ सरकार ? संघगीतामा एउटा श्लोक छ !
‘ब’ : संस्कृतमा धेरै नै रूचि छ, सानो छँदा घरैमा अलिअलि पढेको, पछि आफैं पढेँ । स्टुडेन्ट हुँदा पढ्ने मौका त्यति भएन । तर पढ्छु, सुनुँ त्यो श्लोक…..।
‘क’ : विदुषां शास्त्रतः शक्तिः
वीराण सा च शस्त्रतः ।
शक्तिः सर्वस्व संघतः ।।
भनेको, विद्वानहरू जुन शक्ति शास्त्रहरूबाट प्राप्त गर्ने गर्दछन्, त्यही शक्ति वीरहरूलाई शस्त्रबाट प्राप्त हुन्छ । अरू सामान्य मानिसहरू त्यही शक्ति धन र श्रमबाट प्राप्त गर्दछन् । तर सङ्गठनहरूबाट यी सबै शक्तिहरू सबैलाई प्राप्त हुन्छन् । म पार्टीमा लाग्ने नैतिक शिक्षा यसैबाट भएको हो सरकार । सबै शक्तिभन्दा संगठन शक्ति सुपेरियर हुन्छ भन्ने यसको शिक्षा हो ।
‘ब’ : अँ राम्रो रहेछ, लेखेर पाउँ न, म यहाँभित्र (राजदरबार) का हरूलाई पनि यो बाँडिदिन्छु । ……..हामीलाई पनि कन्स्टिच्युसनल मोनार्कीको अनुभव छैन । अनुभव नहुँदा कहिलेकहिँ मिसअण्डरस्ट्याण्डिङ् पनि हुनसक्छ । हामी चाहन्छौँ कि त्यसो नहोस् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले हामीलाई संविधानअनुसार यो यसो हो भनेर परामर्श दिँदै रहनु पर्छ । यो एक अर्कामा एक्स्चेन्ज अफ भ्युज र शेरीङ्को काम पनि हो । हामीबाट हाम्रो सरकारलाई पूरा सहयोग रहन्छ । तपाईँहरूले लागेको देखेको कुरा हामीलाई भन्नुपर्छ । यो त डेमोक्रेटिक कल्चर इस्टब्लिश गर्दैजाने प्रोसेस पनि हो । …..अब एकछिन् म प्रधानमन्त्रीसँग पर्सनल कुरा पनि गर्न चाहन्छु, हेल्थ केकस्तो छ पीएम्को ?
‘क’ : भगवानको कृपाले हेल्थ बडा ठीक छ सरकार, म त आपूmलाई बुढो भन्नै चाहन्न, म भुतपूर्व युवक हुँ भन्छु, इनर्जेटिक नै छु (राजा वीरेन्द्र निकै राम्ररी हाँस्छन्, किसुनजीको अनुहारमा पनि निकै हाँस्यमुद्रा देखिन्छ) । मलाई नो सुगर, नो हाइपरटेन्सन् । म कहिलेकहीँ दुईपेग ह्विस्की पनि लगाइदिन्छु । आज मलाई ठूलो भारी बिसाएको सुखानुभूति भइरहेको छ, सरकारसँग म कुनै बेला चियर्स् गर्न चाहन्छु । मैले सत्याग्रह (२०४२) पछिचैँ चुरोट छोडेको छु, नो टोबाको ।
‘ब’ : ठीक छ, म पनि पीएम्सँग कुनै समय रिल्याक्समा बस्नेछु । म कन्भिनेन्ट टाइममा पीएमलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु ।
‘क’ : सरकारका पूर्वज गोर्खाबाटै भएझैँ म गोर्खाकै भट्टराई हूँ (राजा वीरेन्द्रले बीचमा टाउको हल्लाउँदै ‘हो, गोर्खा’ मात्र भने) । हाम्रा पूर्वजहरू पृथ्वीनारायण शाहसँगै यता आएका हुन् । ०१५ सालको आम निर्वाचन मैले गोर्खाबाटै लडेँ, सवा तीनशय भोटले म पराजित भएँ ।
राजदरबार हत्याकाण्डपछि गद्दीनसीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग किसुनजीको एक अपरान्ह भेट हुन्छ । भेटघाटको स्थान निर्मल निवासमै राखिएको छ । भेटघाटको संवादमा ‘क’ ले किसुनजी र ‘ज्ञ’ ले ज्ञानेन्द्र भन्ने बुझाउँछ ।
‘क’ : सरकारबाट दर्शनभेटका लागि बोलाईबक्सेको यस अवसरमा मलाई बडा खुसी लाग्या छ । दरबार हत्याकाण्डले सरकारलाई अझै शोक र पीडामा पारिरहेको होला । यही बेला मुलुकको जिम्मेवारी सम्हाल्नु छ । मुलुकमा आएको यस्तो दुःखद अवस्थामा सरकारलाई हामीजस्ता कमनरले के मद्दत गर्न सक्छौँ ?
‘ज्ञ’ : किसुनजीलाई कहाँ कमनर भन्न मिल्छ र ! तपाईँ स्टेट्सम्यान हुनुहुन्छ, हामी सबैले विशेष इस्टीम दिनुपर्ने, दाजु (राजा वीरेन्द्र) बाट त्यही हुकुम हुनेगर्थ्याे । अँ त्यो घटनाको कुरा भन्नुभयो, यस्तो हर्टब्रेक त कहिले निको हुने र ! तै पनि सम्हालिनु पर्छ, आफ्नो दुःखलाई लुकाएर देश र जनताको (दुःख) चाहिँ हेर्नैपर्छ । हामीलाई त आँसु खसाल्ने हक पनि छैन ।
‘क’ : अब परिस्थितिमा पूराका पूरा बदलाव आएको बेलामा कसरी मुलुक चल्नुपर्छ ? सरकारबाट के सोचिबक्सेको छ ?
‘ज्ञ’ : मैले त केही सोच्नै नपाई यहाँ आउनुपर्यो (राज्यारोहण गर्नुपर्यो)। स्थिति एकदम जटिल छ । यो स्थितिमा तपाईँजस्ता जिम्मेवार पोलिटिसियनहरूसँग कुरा गरौँ । सबैका सल्लाहले एउटा वेआउट निकालौँ भन्ने मेरो विचार हो । म किसुनजीलाई एउटा कुरा सोधिहाल्न चाहन्छु, के माओवादीहरूलाई मेनस्ट्रिम पोलिटिक्समा ल्याउन सकिएला ?
‘क’ : त्यो कसरी, बाध्य बनाएर ?
‘ज्ञ’ : बाध्यता नै भन्न त म चाहन्न, फकाएर हुन्छ कि उनीहरूका कतिपय कुरा (माग) लाई पूरा गरेर पनि हुनसक्ला, त्यही तपाईँसँग पनि सल्लाह र निष्कर्ष बनाउँ भनेर । माओइस्टहरूसँग वार्ताको प्रयास तपाईँ पीएम् हुँदा नै पहिलोपटक भएको रहेछ । त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिएला ?
‘क’ : यो चिन्ता सरकारको हो र, त्यो त इलेक्टेड गभर्न्मेन्ट छ, त्यसैको जिम्मेवारी हो ।
‘ज्ञ’ : मैले माने । तर गभर्न्मेन्टलाई सहयोग पुर्याउनु पनि त हाम्रो कर्तब्य होइन र ?
‘क’ : त्यो त हो, यो के छ भने हामीबाटै बिग्रिरहेको देख्छु म त । साथीहरू (विभिन्न पार्टीका नेताहररू) यसलाई गभर्न्मेन्टको समस्या भनिदिन्छन् । गभर्न्मेन्टमा बसेकाहरू यो त गृहमन्त्रालयको समस्या पो उसले गर्नुपर्छ भनिदिन्छन् । गृहमन्त्रालयमा बसेकाहरू यो त पुलिसको समस्या हो भनेर पन्छिन्छन् ।
अनि पुलिसमा पनि कुनै सोर्सफोर्स नभएर सुरक्षित ठाउँमा बसेर काम गर्न नपा’को निरिह पुलिस थ्रीनटथ्री राइफल बोकेर लड्नुपरेको छ । सिभिलियन पुलिसलाई पारामिलिटरी फोर्सको काम लगाएपछि बेचाराहरू धेरै मरिरहेका छन् ।
‘ज्ञ’ : त्यो पनि हो, अनि दाजु (राजा वीरेन्द्र) ले पनि धेरै पेसेन्स् लिएर पर्खिबक्स्यो । तर कुनै चेन्ज देखिएन । त्यहाँ (माओवादीभित्र– सं.) फोरन इलिमेन्टको धेरै इन्फिल्ट्रेसन भइसकेकोले उनीहरूलाई पनि सेफ ल्याण्डिङ्को बाटो चाहिएको छ भनेर रिपोर्ट दिन्छन् । अब म दाजुको झैँ टुलुटुलु हेरेर बसिरहन सक्दिन । मेरो आफ्नै दिमाग जे छ त्यसैका आधारमा केही प्रयास गर्छु । एउटा नेपालीले अर्को नेपाली मारिरहेको यो दुर्दशा कति हेरेर मात्रै बस्ने ?
‘क’ : आफ्नै दिमाग हुनु त राम्रो हो सरकार । तर यो संविधानमा सरकारबाट बेग्लै सक्रियता देखाउने ठाउँ कहाँनेर छ ? त्यसका लागि संविधानलाई ओभरटेक गर्नुपर्छ, त्यो भनेको टेकओभर हो । यदि संविधान उल्लङ्घन भयो भने त म असी वर्षको बुढो एक्लै भए पनि विरोध गर्नेछु । त्यो बेला हामीजस्ताले बस्ने उचित ठाउँ कारागार नै होला । म त्यतै जान्छु र उतै मरूँला ।
‘ज्ञ’ : किसुनजीले मेरो कुरा कसरी बुझिदिनु भयो अथवा मैले बुझाउन सकिन । यो संविधानलाई नाघेर म जान खोजेको होइन । मैले अधिकार चलाउन खोजेको होइन, संविधानले यो राष्ट्रको रक्षाका लागि हाम्रा पनि कत्र्यब्य देखाएको होला । त्यो कर्तब्य के हुन सक्छ ? भनेर सल्लाह गर्न खोजेको हो ।
‘क’ : सरकारले इलेक्टेड गभर्न्मेन्टलाई सल्लाह दिने, अनुभव सुनाउने, सचेत गराउने, देशको परिस्थितिबारे जायजा लिने र गभर्न्मेन्टलाई सफल बन्न आफ्नो तरफबाट सहयोग पुर्याइदिने हो । अरू जे गर्नुछ, गभर्न्मेन्टले गर्छ । यश अपयश जे मिल्नेहो उसैलाई मिल्छ ।
‘ज्ञ’ : मैले त्यहाँभन्दा उता जान खोजेको मिसअन्डरस्ट्याण्डिङ् बिल्कुल नहोस् । यो संविधानको डिमार्केशन नाघेर जाने हाम्रो कुनै कल्पना वा इच्छा छैन । हामी सबैले यसैलाई सफल बनाउने हो । हामीले जस्तै सरकारले आफ्नो कामको डिमार्केशन र यो संविधानको सार्थकताबारे सोचिदेओस् ।
‘क’ : यदि यसै हुन पायो भने त बडा राम्रो हुनेछ सरकार । अब यसै होस् ।
(स्व. किसुनजीले विभिन्न सन्दर्भमा बोल्दा व्यक्त भएका, उहाँसँग दुईपटक भएका मेरो कुराकानी र विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीमा आधारित)